ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသော မျိုးချစ် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို လူလယ်ကောင်မှာ ထိုးကြိတ်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်လုပ်တော်များ – မူရင်း ( http://www.myanmarexpress.net/2012/06/blog-post_6935.html ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသော မျိုးချစ် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို လူလယ်ကောင်မှာ ထိုးကြိတ်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်လုပ်တော်များ – မူရင်း ( http://www.myanmarexpress.net/2012/06/blog-post_6935.html )
ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသော မျိုးချစ် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို လူလယ်ကောင်မှာ ထိုးကြိတ်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်လုပ်တော်များ – မူရင်း ( http://www.myanmarexpress.net/2012/06/blog-post_6935.html )
Posted by Knowledge Seeker on Jul 1, 2012 in Copy/Paste |9comments
by Thway Thit Sar on Saturday, June 30, 2012 at 11:55pm · ON FACE BOOK
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လေဆိပ်မှထွက်ခွာလာစဉ် ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံတွင် ကုလားမ စုကြည်အလိုမရှိ ဟူသော စာတန်းကိုင်ဆောင်ပြီး ဆန္ဒပြနေသူများအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုံခြုံရေးတာဝန် ယူထားသူများမှ လိုက်လံ ထိုးကြိတ်နေပုံများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လက်သုံးစကားကတော့ “ဥပဒေ စိုးမိုးမှု ရှိရေး” ဆိုတဲ့ စကားလုံး ဖြစ်ပြီး ၊ “ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်” လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလေးများကို ဥပဒေမဲ့ထိုးကြိတ် မှုအပေါ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကာ ဝင်ရောက်တားမြစ်ခဲ့ခြင်း လုံးဝ မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ NLD က ဂျာနယ်လစ် တစ်ဦးကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားရိုင်းပြမှု ဖြစ်ပွဲခဲ့ဖူးပြီး Messenger ဂျာနယ်နဲ့ MJN က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ကို ရှုံ့ချခဲ့ကြပါတယ်…
မူရင်း ( http://www.myanmarexpress.net/2012/06/blog-post_6935.html )
မှတ်ချက်။ ။မသမာတဲ့အစီအစဉ်နဲ့တစ်ဘက်နဲ ့တစ်ဘက် ရန်တိုက် သွေးထိုးပေးတဲ့ သတင်းဟု ယူဆပါသည်။
ဆန္ဒပြသူကို ထိုးကြိတ်သူများမှာ ဒေါ်စုလုံခြုံရေးဆိုတာထက် အနီးဝန်းကျင်မှ လာရောက်ကြိုဆိုသူ အရပ်သား အများစုဖြစ်ပါသည်။
ဤသတင်းအား တိကျစွာ ကိုယ်တိုင်သိ၍ တာဝန်ယူနိုင်မည်ဆိုလျင် မည်သူမဆို အထောက်ထားအပြည့်အစုံနှင့် တင်နိုင်ပါသည်။
This is the post I found at Face Book by Thway Thit Sar and not my message. Just to share the information for further consideration.
အကောင်းဘက်ကကြည့်ရင် .. သွားပုပ်လေလွင့်ပြောတာတွေ ကိုကြားဖူးနားဝရှိသွားတယ်ပေါ့။
အဆိုးဘက်က ကြည့်ရင် .. Myanmarexpress ကိုကြေငြာနေတာပါ။ ပိုက်ပိုက်များများဝင်အောင်လို့ ။ အဟီး ။
ကုလား လတ် says:
ဒါ ဘယ်သူ ့လက်ချက်လဲ။
ဖမ်းဆီး ထောင်ချ သင့်တယ်။
ငါလိုးမသား လီးလိုလိုမှိုလိုလို လာလုပ်နေတယ်
ရခိုင်တွေက အဖွားကြီးကို လီးဖြစ်လို့ ဆန္ဒပြရမှာလား
မင်းအမေနဲ့ ကလားတွေ ဘာဖြစ်တဲ့ဇာတ်ထုပ်ရေးကွာ
တော်တော် အဆဲပုပ်တာဘဲ …
http://www.myanmarexpress.net ကိုဝင်ဖတ်ကြည့်တာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကခံစားလို့မရပါဘူးရှင်။တဖက်သားကိုစော်ကားတာတွေကများများပါ။ကိုယ့်ထက်သာမနာလိုမျိူးဖြစ်နေတာ ။. Myanmarexpressကပြောတာတွေကိုလက်ခံနိုင်တဲ့သူရှားမှာပါ။
ဒီကိတ်စ ဟာ ရိုးရှင်းလွန်းပါတယ်
“ကုလားမ စုကြည်အလိုမရှိ” လို ့ဆန္ဒပြနေတဲ့ လူတွေဟာ ၊ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှာကို မလိုလားတဲ့ အဖွဲ ့အစည်းတွေရဲ ့လက်ကိုင်တုတ်တွေ ဖြစ်ပြီး ၊ တမင်သပ်သပ် ရန်စ စော်ကားတာပါ ။ နောက်ပြီး “ ဆန္ဒပြနေတာ ကို ဥပဒေမဲ့ထိုးကြိတ် ” တယ်ဆိုတဲ့ စကားသုံးထားတာကို ကန် ့ကွက်ပါတယ် ။
အမှန်တစ်ကယ်က သူတို ့တွေ ဟာ သပ်သပ်မဲ့ အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာ ရခိုင်အယောင်ဆောင်ပြီး အရင်စ ရန်စစော်ကားတာပါ ။
ဆိုတော့ ထိုးကြိတ်ရုံတင် ထိုးကြိတ်ခဲ့တာ နဲနေပါသေးတယ် ။ ခွေးက လူကို ကိုက်လာရင် အဲ့ခွေးကို သုတ်သင် ရှင်းလင်းပစ်ရမှာ လူ ရဲ ့တာဝန်ပါ ။